गृहमन्त्री बादलले नै यस्तो काम गरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी छक्क, रेशम चौधरी मख्ख ! — Sanchar Kendra
यसैबीच गृहमन्त्री थापाले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहेका कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिएका छन् ।
गएको फाुगन २८ गते अज्ञात समूहको खुकरी र गोली प्रहारबाट मेयर चौधरी घाइते भएका थिए । भेटमा गृहमन्त्री थापाले चौधरीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुसँग जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी नगर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री थापाले घाइते चौधरीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने जानकारी समेत दिए । उनले आक्रमणकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
यसैगरी, गृहमन्त्री थापाले शुक्रबार महाराजगञ्जमा रहेको नेपाल प्रहरी अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । उनले अस्पतालले दिईरहेको सेवा, सुविधाको स्रहाना गर्दै आगामी दिनमा सेवा थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
अस्पतालका प्रमुख, अतिरीक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले अस्पतालले दिईरहेको सेवा, सुविधा, बजेट, दरबन्दी र प्रविधि लगायतबारे गृहमन्त्री थापालाई जानकारी गराए ।